Uchwepheshe we-Semalt: Amathrendi ama-Vital Digital Marketing Trends ngo-2017
Abakhangisi beDivamenti bavame ukuhlangana nezinqubo ezintsha kanye nezinguquko kudijithaliimvelo. Izinga lokushintsha livame ukungabi nalutho futhi ngezinye izikhathi linobudlova. Umlando wezamabhizinisi ubonisa ukuthi ukutholwa nokuziphendukela kwemvelo yizona zindlela kuphelaukuze usinde esimweni esishintshayo njalo - stoff meterware gnstig.
Ngo-2016, ama-digital drift aqhubeka phambili ukuvuselela imvelo yokumaketha. Iukunyuka kwemikhuba yokubusa okuphathekayo kuye kwafinyelela izinga, okuzolimaza kwidokodo yedeskithophu. Amasayithi afana no-Pinterest no-Snapchatzikhula futhi ziheha njalo abasebenzisi. Izentuthuko zamanje zivezwe kulabo abathengi bedijithali abalindele.
Ngesipiliyoni sokusebenza namabhizinisi amancane namaphakathi ahlukene,senze izinguquko ezihlukahlukene eminyakeni edlule-silindele izinkinga ezintsha futhi sithuthukisa amathuba amasha, Lahleka noma u-Adapt: ​​ kithi, lokhukusho ukuthi kuqinisile. Njengalokhu, ngaso sonke isikhathi sigxila ekugqeni ukuzama ukubona ukuthi yikuphi okuzayo esikhathini esizayo.
Ekuqaleni kwekota yesithathu ka-2017, isazi esiholela phambili i-Semalt ,U-Nik Chaykovskiy, ufingqa uhlu lwemikhuba engumgogodla wokumaketha kwe-digital ukusiza abakhangisi ukuba balandele kulezi zintuthuko ezintsha.
1. Umakhalekhukhwini Ukwazisa Ukuthengiswa Kwamanje
Ukusetshenziswa kwamafoni kuye kwanda ngokuphenya ngePew ResearchIsikhungo esibonisa ukuthi amaphesenti angu-77 wesakhamuzi sase-US ane-smartphone. Izibalo zonyaka zizobonisa ukuthi ama-Smartphones angamakhasimende aziswa kakhuluumlingani wezitolo owuthandayo kakhulu.
I-smartphone manje ingakwazi ukuhlola ukubuyekezwa komkhiqizo, uncoma imikhiqizo, futhi yenzaukuthenga ngosizo lwesiphequluli. Izinga lapho lezi zixhobo zihlanganiswa khona ekuphileni kwethu kwansuku zonke kubenza zibe yingxenye yesiko lethu.
2. Ukusakaza kwevidiyo okubukhoma kuthola ukuqhutshwa kwe-Traction njalo
Ngo-2015, i-Meerkat, uhlelo lokusebenza lokusakazwa bukhoma lwasungulwa futhi luyinto entsha.Ngonyaka owodwa kamuva, amasayithi omphakathi we-social media ayedlulele kusuka ku-Facebook, Twitter, Instagram, ne-YouTube.
Ukusakaza bukhoma kunikeza imikhiqizo nabathengisi ukuphoqa okunomncintiswano ngaphezu kwamanyeamapulatifomu kusukela kuthuthukisa ulwazi lomthengi. Ingxoxo ephilayo eyenzelwe kahle yenza umkhiqizo ukhulise obala futhi uyenzeukuxhumana okungakaze kwenziwe ngaphambilini.
3. Ukwenza ngokwezifiso zamandla amakhulu
Idatha enkulu ibe yisihluthulelo ekukhuliseni isipiliyoni somsebenzisi esenziwe ngokwezifiso. Ama-Amazon,Spotify, ne-Netflix yizibonelo zezinkampani ezinkulu ezenza ngcono idatha enkulu ngenhloso yokuhlinzeka abasebenzisi ngezinga eliphezuluukuzenzela. Ukwenyuka kwedatha kunika umkhiqizo ukwenza ukubikezela okungcono kanye nezinhloso ezibangelwa inani elengeziwe labasebenzisi.
4. Ukuzenzekela Ukuthengisa Kukhona Okwedlula Kakhulu
Abaningi bezimakethe babheka ukuzenzekela kokuthengisa njengokubalulekileisici sempumelelo. I-automation njengamanje isetshenziselwa ukuhlaziya izici zokumaketha kokuqukethwe.
5. Ukukhangisa Okumnyama Kuthuthukisa Ukukhangisa Okuqukethwe
Ukukhangisa kokuqukethwe kuye kwakha isisekelo sokuqukethwe okuhle nokuhle. OkukhuluUmthamo wemininingwane ekhona iphoqelele abaqambi ukuba bahlele izindlela ezingcono zokubandakanya amasu omlaleli nezindlela zokuhlela ukubandakanya abasebenzisi kuwookuhlangenwe nakho okuhlukahlukene.
Amabhizinisi aphumelelayo kakhulu, amakhulu noma amancane aphoqeleka ukuba aguquke futhi avuseleleamasu amasha okuqinisekisa ukusimama. Ukugxila ezintweni ezishiwo ngenhla futhi ukuzihlanganisa kuyisinyathelo esikhulu ekuvulekeniamathuba okukhangisa ahlukahlukene.